गल्ती हुँदा म के गरूँ?
युवाहरूको १० प्रश्नका जवाफहरू
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अट्टी अफ्रिकान्स अबुइ अब्खाज अब्बे अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अलुर अल्टाइ अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइरिस आएमारा आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा इबान इबानाग इबिन्डा इलोको इसोको ईवी उइघुर (सिरिलिक) उङ्गान्गेला उङ्गाबेरे उज्बेक उज्बेक (रोमन) उड्मुर्त उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एडो एफिक एस्टोनियन ओक्पे ओटेटेला ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काचिन काजाक काजाक (अरबी) काबाइली काबार्डिन-सर्केस काबीय काबुभरदियानु काम्बा किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किपेन्डे किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसी किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (टिना) कुइचुआ (पास्टाजा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंकनी (रोमन) कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा कोस्रियन क्याटालान क्युबान साङ्केतिक भाषा क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा खाना गा गाउरानी गारीफुना गालिसियन गुएरे गुजराती गुर्जे गून गोकाना ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुकिज चुभास चेक चोपी चोल चोवे जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जिम्बावे साङ्केतिक भाषा जुला जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टान्ड्रयो टिभ टुभालुअन टेटन डिली टोंगन टोराजा डच डाँग्मे डायाक ङाजु डिगोर डेनिश ड्रेहु ताङ्काराना ताजिकी तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई दक्षिण अफ्रिकी साङ्केतिक भाषा दामारा नजेमा नर्वेली नाइजेरियन पिजिन नाभाहो नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस नेपाली नोंगा न्दौ न्यानेका न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पंजाबी (शाहमुखी) पलाअन पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पिजिन (क्यामरून) पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोकोम्ची पोनापियन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फिजियन फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फेरोई फ्रान्सेली बंगाली बम्बारा बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाटाक (सिमालुङ्गुन) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बास्क बिकोल बियाक बिसाउ गिनियन क्रिओल बिस्लामा बुल्गेरियन बेते बेलिज क्रिओल बोउलो बोलिभियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज भियतनामिज साङ्केतिक भाषा भेजो भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुवा मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मार्शलिज मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिजो मिस्किटो मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन याकुबा युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोतुमन रोमानियन रोमानी (दक्षिणी ग्रिस) रोमानी (म्यासेडोनिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) सिरिलिक रोमानी (रोमानिया) लाओशियन लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुन्डा लुभेल लेन्जे लो जर्मन लोम्वे वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना श्वा सङ्गीर सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिनाम्वांगा सिबेम्बा सिलोजी सुन्डा सेङ्गा (जाम्बिया) सेत्स्वाना सेना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हुइचोल हेरेरो हौसा
यसबारे किन चासो राख्नुपर्छ?
आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुभयो भने तपाईं अझ भरोसायोग्य र जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुनेछ।
तपाईं के गर्नुहुनेछ?
कल्पना गर्नुहोस्: साथीहरूसँग खेल्दै गर्दा रमनले फालेको बल छिमेकीको गाडीमा लाग्छ अनि त्यसको सिसा फुट्‌छ।
तपाईं रमन हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो?
तपाईंसँग तीनवटा उपाय छन्‌:
२. अरूलाई दोष लगाउने।
३. छिमेकीलाई साँचो कुरा बताउने अनि क्षतिपूर्ति गर्न अघि सर्ने।
तपाईंलाई पहिलो उपाय अपनाउन उपयुक्त लाग्छ होला। तर गल्ती स्वीकार्नु राम्रो हुन्छ चाहे त्यो सानो गल्ती होस् वा ठूलो।
गल्ती स्वीकार्नुपर्ने तीन वटा कारण
१. गल्ती स्वीकार्नु सही हो।
बाइबल भन्छ: “हामी सबै कुरामा इमानदार भई चल्न चाहन्छौं।”—हिब्रू १३:१८.
२. आफ्नो गल्ती स्वीकार्नेहरुलाई मानिसहरू माफी दिन तयार हुन्छन्‌।
बाइबल भन्छ: “तिम्रा दोषहरू लुकायौ भने तिम्रो उन्नति हुँदैन, तर स्वीकार गरेर ती छोड्‌यौ भने तिमीले कृपा दृष्टि पाउनेछौ।”—हितोपदेश २८:१३.
३. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गल्ती स्वीकारेर ईश्वरलाई खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ।
बाइबल भन्छ: “जो सोझो छैन, त्यसलाई परमप्रभु घिन गर्नुहुन्छ, तर सोझा मानिसहरू परमेश्वरका विश्वास-पात्र हुन्छन्‌।”—हितोपदेश ३:३२.
बीस वर्षीया करिश्माले द्रुतगतिमा गाडी चलाएकोले जरिबाना तिर्नुपर्ने कुरा बुबाबाट लुकाइन्‌। तर यो कुरा तिनले सधैंभरि लुकाएर राख्न सकिनन्‌। करिश्मा भन्छिन्‌, “लगभग एक वर्षपछि मैले जरिबाना तिर्नुपर्ने कुरा बुबाले थाह पाउनु भयो। त्यसपछि म यत्ति धेरै समस्यामा परें, कुरै नगरौं!”
यसबाट के सिक्न सक्छौं? करिश्मा भन्छिन्‌: “गल्ती लुकाउँदा परिस्थिति झन्‌ बिग्रन्छ। कुनै न कुनै दिन त्यसको नतिजा भोग्नै पर्ने हुन्छ।”
गल्तीहरूबाट कसरी पाठ सिक्न सकिन्छ?
बाइबल भन्छ: “हामी सबै जना धेरै चोटि चुक्छौं।” (याकूब ३:२) तुरुन्तै आफ्नो गल्ती स्वीकार्नु भनेको नम्र र परिपक्व छौं भन्ने कुराको चिन्ह हो।
अर्को कदम भनेको आफ्नो गल्तीबाट पाठ सिक्नु हो। निशा नाम गरेकी केटी यसो भन्छिन्‌: “गल्तीहरूबाट थुप्रै कुरा सिक्न सक्छौं। यसले मलाई अझ असल व्यक्ति बन्न मदत गर्छ। साथै अर्को चोटि फरक तरिकामा परिस्थिति सम्हाल्न पनि मदत गर्छ।” तपाईं कसरी त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ, हेरौं।
तपाईंले बुबाको बाइक मागेर चलाउनुभयो अनि बाइक बिग्रियो। अब तपाईं के गर्नुहुन्छ?
त्यसबारे केही पनि भन्नुहुन्न र बुबाले याद नगरोस् भन्ने आशा गर्नुहुन्छ।
बुबालाई सबै कुरा बताउनुहुन्छ।
बुबालाई सबै कुरा बताउनुहुन्छ तर त्यसको दोष अरूलाई दिनुहुन्छ।
नपढेकोले तपाईं जाँचमा फेल हुनुभयो। अब तपाईं के गर्नुहुन्छ?
जाँचलाई दोष दिनुहुन्छ।
आफ्नै गल्ती स्वीकार्नुहुन्छ।
शिक्षकले मलाई मन नपराएकोले फेल गरेको हो भनेर दाबी गर्नुहुन्छ।
विगतको गल्तीबारे सोचिरहनु भनेको गाडी चलाउँदा पछाडिका कुराहरू हेर्ने ऐनामा हेरिरहनु जस्तै हो
तपाईंको बुबा र शिक्षकको ठाउँमा आफूलाई राख्नुहोस्। तपाईंले सहर्ष आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुभयो भने तपाईंको बुबा र शिक्षकले तपाईंबारे के सोच्नुहुन्छ? तर आफ्नो गल्ती लुकाउन खोज्नुभयो भने चाहिं उहाँहरूले तपाईंबारे के सोच्नुहुन्छ?
गएको वर्ष तपाईंले कस्ता गल्तीहरू गर्नुभयो, विचार गर्नुहोस्। अनि तल दिइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्।
कस्तो गल्ती भयो? त्यसलाई कसरी सम्हाल्नुभयो?
त्यसको दोष अरूलाई दिएँ।
सहर्ष गल्ती स्वीकारें।
गल्ती स्वीकार्नु भएको थिएन भने कस्तो महसुस भयो?
ढुक्क महसुस गरें—कसैले थाह पाएन!
दोषी महसुस गरें—साँचो बोलेको भए हुन्थ्यो।
परिस्थितिलाई कसरी राम्रोसँग सम्हाल्न सक्नुहुन्थ्यो?
तपाईंले आफ्नो गल्तीबाट के सिक्नुभयो?
तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?
केही मानिसहरू किन गल्ती स्वीकार्न हिचकिचाउँछन्‌?
आफ्ना गल्तीहरू सधैं लुकाउन खोज्नुहुन्छ भने अरूले तपाईंबारे के सोच्छन्‌? आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार्नुहुन्छ भने अरूले तपाईंबारे के सोच्छन्‌?—लूका १६:१०.
तपाईंबाट १ वर्षभित्र गल्ती भयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ, लक्ष्यहरू राख्नुहोस्।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने गल्ती हुँदा म के गरूँ?
प्रश्न १ म कस्तो व्यक्ति हुँ?
प्रश्न २ आफ्नो रूपरङ्‌गबारे मलाई किन चिन्ता लाग्छ?
प्रश्न ३ आमाबाबुसित कसरी कुरा गर्ने?
प्रश्न ४ गल्ती हुँदा म के गरूँ?
प्रश्न ५ कसैले स्कुलमा दादागिरी देखाउँदा के गरूँ?
प्रश्न ६ साथीहरूको दबाबको कसरी प्रतिरोध गर्न सक्छु?
प्रश्न ७ यौनसम्बन्ध राख्ने दबाब आयो भने के गरूँ?
प्रश्न ८ यौन दुर्व्यवहारबारे मैले के थाह पाउनुपर्छ?
प्रश्न ९ मैले क्रमविकासमा विश्वास गर्नु ठीक हो?
प्रश्न १० बाइबलले मलाई कसरी मदत गर्न सक्छ?
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प युवाहरूको १० प्रश्नका जवाफहरू
शेयर गर्ने शेयर गर्ने युवाहरूको १० प्रश्नका जवाफहरू